Aqristayaal waxaan idiin heynaa wararki ugu danbeeyey ee Suuqa Kala Iibsiga ciyaartooyda saakay oo Jimca ah. | WWW.DARARWEYNE.TK
Aqristayaal waxaan idiin heynaa wararki ugu danbeeyey ee Suuqa Kala Iibsiga ciyaartooyda saakay oo Jimca ah.
Iyadoo xalay uu macalinka Arsenal xaqiijiyey in laacibiintiisa kala ah Cesc Fabregas iyo Samir Nasri ay ku kala biirayaan saacadaha soo aadan kooxaha Barcelona iyo Manchester City ayaa waxaa durbaba soo baxay ninka gali doono boosaskaasi.
Weeraryahanka kooxda Arsenal Marouane Chamakh ayaa
sheegay in kooxda ay dooneyso in ay soo iibsato xidiga kooxda Lyon Yoann Gourcuff si uu badal ugu noqdo booska uu ka tagayo Fabregas.
Laacibka heerka caalami ee dalka Morocco Chamack ayaa wareysi uu siiyey Telafashinka L’Equipe TV ku sheegay in aysan ka laba labeysneyn in ay helaan Gourcuff oo ah 25 jir horay ugu soo ciyaaray kooxda AC Milan.
Chamakh ayaa wax badan ka yaqaano Gourcuff oo ay iskala soo ciyaareen kooxda Bordeaux ka hor inta uusan ku biirin Arsenal sanadki 2010 halka Gourcoff uu isna aaday Lyon oo ku gadatay £20m.
Manchester United ayaa iska dhaaftay doonitaankeedi ahaa xidiga kooxda Inter Milan Wesley Sneijder.
Tababaraha kooxda United manager Sir Alex Ferguson ayaa rajeynayey in wiilkaan u dhashay dalka Holland uu ugu danbeyn keeno dhamaadka bishaan, laakin ilo wareedyo ku sugan garoonka Old Trafford ayaa u sheegay Sportsmail in hada uu aad usii kordhayo niyad jabka ay ka qabto kooxda kadib marki ay aad u dheeraatay xero gelintiisa.
United ayaa daba carareysay laacibka kubad sameeyahaya tan iyo xilli ciyaareedki lasoo dhaafay.
Sababta kaliyah ee hada kusoo celin karto United eryashada 27 jirkaan ayaa lagu sheegay isaga oo yareeyo mushaarka uu ka qaato kooxda.
Xidiga dalka Ingiriiska OWEN HARGREAVES ayaa diyaar u ah inuu si toos ah u ciyaaro kubada kadib sadex sano oo uu dhaawac uga maqnaa ciyaaraha.
Laacibkaan qadka dhexe ayaa waxaa iska fasaxay kooxda Manchester United bishi July kadib marki ay ragaadiyeen dhaawacyo kusoo noq noqday.
Hada waxa uu ka tirsanyahay kooxda West Brom isaga oo rajeynayo in kooxdiisa uu wacdaro ka dhigo.
Macalinka West Brom boss Roy Hodgson ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa inuu arko Owen oo ciyaaraha.
Kooxda Chelsea ayaa dooneyso in ay ka dulqaado naadiga Real Madrid laacibka da,da yar ee kooxda Santos Neymar.
Macalinka Real Jose Mourinho ayaa sheegay in uu aad u daneyno wiilkaasi u dhashay dalka Brazil ee 19 jirka ah kaasoo ka ciyaaro dhanka weerarka.
Chelsea oo u muuqatay in ay ka niyad jabtay ayaa hada soo nooleysay rajadaasi.
« Cristiano Ronaldo: Kama Fekerayo Abaalmarin Shaqsiyadeed, Waxaan Doonayaa Koobab
Taariikh Nololeedka Xiddiga weyn Lionell Messi »